bhimphoto: के हामी आफूलाई चिन्छौं ?
के हामी आफूलाई चिन्छौं ?
अब मैले छाडेँ साधु गुरु र गोपाल दासको प्रवचन् सुन्न । सजिलो छ, हातमा मोबाइल, घर र अफिसमा कम्प्युटर । युट्युब खोल्यो, सुन्यो ।
यो संसार बडा अनौठो छ, इन्टरनेटले जे खोज्न, पढ्न वा हेर्न खोज्यो, तिनका लिंक सजिलै बताउँछ। खोज्न, हेर्न सजिलो पारेको छ।
साधु गुरु बडा अच्छा कुरा गर्छन् । गुरु गोपाल दासका कुरा पनि रमाइला । यसो यसो गरे जीवन सफल हुन्छ । यसो यसो गर्न हुँदैन । हामी के गर्दैछौं, किन र कसरी ? खासमा हाम्रो बुझाइ साँघुरो छ, त्यसको दायरा बढाउनु पर्छ । जीवन चलाउन पैसा चाहिन्छ । यसो गरे पैसा पाइन्छ । पैसा भए मात्रै जीवन सफल हुँदैन । हाम्रा सुख, हर्ष-विस्मात यसकारण हुन्छन् ।
ओहो ! तिनका कुरामा के छैन ? सबैथोक छ । सुन्न आनन्द, सुनाउन झन् आनन्द ।
एपिसोडपिच्छे उनीहरुलाई सुनिरहँदा एकदिन लाग्यो- यिनीहरु किन राम्रा कुरा मात्रै गर्छन् ? किन मान्छेका बानी सपार्ने, राम्रो जीवन जिउने सूत्र बताउँछन् ? अनि फेरि लाग्यो- जसले जे काम गरिरहन्छ, उ पोख्त हुन्छ। राम्रो गर्छ । नियमित प्रवचन दिइरहने कोही पनि कटु बोल्दैनन्, नमिठो बोल्दैनन् । यो सही हो, उनीहरु कामै प्रवचन् दिने गर्छन्- अनि नगरुन् त रसिला कुरा !
साधु गुरु यतिबेला हुम्लातिर मानसरोवर हेर्न गएका रैछन् । समाचार पढ्न पाइयो । ती भीआइपी साधु हुन् । उनलाई केही कमी छैन । घुम्न-खान, आनन्दले निदाउन पुग्यो भने मान्छेले दु:खका कुरा गर्दैन । किनभने जे व्यहोर्नु पर्दैन, त्यसबारे सोचेर-बोलेर किन टाउको दुखाउने !
एउटा कुनै परिकार बनाइरहनेले छिटो र मिठो बनाउँछ । धेरै तरिकाबाट बनाउन जान्दछ, जो एकाधपटक मात्रै अभ्यास गरेकाको ल्याकतको कुरा हुँदै होइन । उसको रेसिपीको हामी तारिफ गरौं तर बिर्सन नहुने के हो भने उ त्यही गर्छ, राम्रो गर्दैन भने किन पो गरिरहन्थ्यो ।
युट्युबका भिडियोमा बेला बेला विज्ञापन दौडन्छन् । अँ साँच्चै भिडियोले पैसा दिन्छन् । जति धैरैले हेरेको छ, त्यसको गणना हुन्छ। यो छुट्टै कुरा हो की हजारौं, लाखौं भिडियोमा भ्युअर कसका कति होलान् । तर मानिसलाई जीवन सफल बनाउनु छ । खुसी र सुखी भएर बाँच्नु छ । सबै खालका कन्टेन्टका खास खालका दर्शक छन् । त्यसैले युट्युबमा अपलोडर धैरै खालका छन् ।
साधुहरु प्रवचनबाट कमाउँछन्- अनुयायी, स्रोता-दर्शक र पैसा । हामी के कमाउँछौं ? ज्ञान त्यसै पाइन्छ भन्नुहोला । यो पनि सही हो । तर हामीले हाम्रो समय गुमाएका छौं । थोर थोरै सही, पैसा पनि गुमाएका छौं ।
अनि यसपछि यिनीहरुका प्रवचनमाथिको मेरो मोह भंग भयो । मैले सुन्न छाडेँ। त्यसै पनि मलाइ धेरै अघिदेखि लाग्दै आएको हो- मननीय भनाइहरु भित्तामा कोरिएको सुन्दर देखिन्छ, मान्छेले अनुसरण गर्दैनन् । जसले गर्छु भन्छ, ढाँट्छ । यो कोरोना महामारीको त्रासको समय हो । सिनेमाघर बन्द छन् । भेला-जमघट विरलै मात्र छन् । हामी ले भेला हुन बिर्सनु परेको छ। हाम्रो दिनचर्या बिथोलिएको छ । बिथोलिनुलाई नै हामीले रुटिन बनाएर सामान्यीकरणको प्रयास जारी राखेका छौं । आफैंलाई लगाउन मन पर्दैन तर अरुलाई सोध्छौं- तपाइँको मास्क खोइ ?
परामर्श मनोविज्ञानको कक्षामा अस्ति सरले भन्नुभो- 'मान्छेले अरु कस्तो छ भन्ने फरर भनिदिन्छ । आफू कस्तो हुँ भन्ने जानेकै हुँदैन। आफूलाई जान्न खोज्नेहरु अरुका विषयमा कम बोल्छन् । धैरै सुन्छन् ।' यो मलाइ प्रवचनकै अंश जस्तो लाग्यो । हो पनि ।
हरेकलाई अरुका बारेमा चासो छ । को के गर्छ, किन गर्छ, बानीबेहोरा कस्तो ? अनि यहाँ सकारात्मक कम, नकारात्मक कुरामा बढी चासो हुन्छ । समाज किन यस्तो हुन्छ ? हामी किन त्यस्तो हुन्छौं ? विचार गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा छन् । कोही किन त्यस्तो छ ? तपाइ-हामीले व्यहोर्नु वा कुनै किसिमको सम्बन्ध-सम्पर्क गर्नु छैन भने 'नजाने गाउँको बाटो नसोध्नू' लाई अनुसरण गर्नुपर्ने हो । त्यो हुन सक्छ ।
तर हामीलाई आफ्नो बानी थाहा हुन्छ । हामीलाई के र कस्ता अवस्थाले खुसी, दु:खी र आवेशमा ल्याउँछ भन्ने पनि हेक्का हुन्छ । ज्ञान दिन बडा सजिलो छ । हिन्दी फिल्म 'सिंघम' मा एउटा डाइलग छ, थानामा आएको भिलेनको चम्चालाई भकुरेर हिरासतमा थुनेपछि 'छाडि दे' भन्न आएको डीएसपीलाई इन्सपेक्टर अजय देवगनले भनेको -' मेरी जरुरतें कम है, इसलिए मेरी जमीर मे दम है ।'
सिनेमाको कथा समाजबाटै टिप्ने हो । अनि संवाद लेख्ने पनि स्वाभाविक लाग्ने नै हुन्छन् । त्यो हो त सिनेमाको डाइलग , मलाइ यसलाई धेरै कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ । मान्छेलाई आवश्यकताले दौडाउँछ । मेहनत गराउँछ । हाम्रा आवश्यकता जति कम हुन्छन्, तनाव पनि कम हुन्छ ।
हाम्रा आवश्यकताहरुको पनि प्रकारलाई वर्गीकरण गर्नुपर्छ । भान्सालाई सामान चाहियो भने किराना पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोरमध्ये कहाँ जानु हुन्छ ? किरानामा गए केके चाहिन्छ, त्यही त्यही ल्याइन्छ । डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पसे चाहिने त ल्याइन्छ तर साथमा नल्याउँदा हुने सामान पनि बोकिन्छ । कारण जुन ढोकाबाट हामी पस्छौं, त्यहाँ हामीलाई नबोक्दा पनि हुने सामान बडो गज्जपले सजिएर आकर्षित गरिरहेका देखिन्छन् ।
त्यसैले हाम्रा आवश्यकता बानीमा धेरै निर्भर गर्छन् । के चाहिन्छ, किन चाहिन्छ, के हामी त्यही मात्रै गर्छौ जे आवश्यक हो ?
मनोविज्ञानले भन्ने गरेको मान्छेका दुई गुण बारे मैले धेरै अघि पनि लेखेको छु- जन्मजात र अर्जित । आवश्यकताहरु मात्रै होइन गुण, बानीबेहोराले हामीलाई खर्च गर्न सजिलो-अप्ठ्यारो पार्छ । हामीलाई आफ्ना बानी असल छैनन् भन्ने अन्त मनबाट थाहा हुन्छ । अलिकति आडम्बर, अलिकति बनिसकेको इमेजमा अरुले के ठान्लान् भनेर कमसल बानीलाई असल भन्ने वकालत हामी छाड्दैनौं ।
समय यस्तो छ की मान्छे आफ्नो क्षमता, पौरखलाई माझ्नुभन्दा अरुको खोट देखाउँदा आफ्नो जय हुन्छ भन्ने ठान्छ । हरेकलाई अरुमा कमजोरी मात्रै देखाउनु छ । कसैका प्रशंसा गरिहाले पनि वक्ता चाहन्छ- त्यो प्रशंसा पाउनेले म प्रति अनुगृहित हुनुपर्छ, मलाइ मान्नुपर्छ ।
मनोविज्ञानको कक्षा आफूलाई चिनाउँछ । आफैंप्रति सशंकित पनि बनाउँछ । आफूलाई सामान्य बनाएर समाज र असमान्यतालाई हेर्न सिकाउँछ । अभ्यास जारी छ ।
दुइटा होमवर्क पेन्डिङ छन् । लेख्ने बानी बनाउनु छ । रमाइला कुरा फेरि फेरि ब्लगमा जतन गरम्ला ।
अरू पछि लेखौंला ...
Posted by Bhim Prasad Ghimire at 10:23 AM
देश परिवेश (51)
CSMT - Front Vs Back
बसिबियाँलोः एक अ-धार्मिकको आत्मवृत्तान्त - काठमाडौँ र इस्लामाबादमा कतिपय कुरा उस्तै छन्, र कतिपय कुरा फरक । फूलहरूको सौन्दर्य उस्तै छ । पानी परेपछिको माटोको गन्ध उस्तै छ । आकाशमा मनमौजी घुम्ने बाद...
घोडा तबेला [संस्मरण] - स्याफ्रुवेसीबाट बिहान साँढे सात बजे निस्कँदा, एकैदिनमा धेरै माथिसम्म नजानु 'हाइ' (लेक) लाग्छ भन्ने लोप्साङ, लामा होटल आइपुग्दा, पानी पर्दैन तपाईहरु माथि जा...
अस्पतालबाट डेराको यात्रा आज जसोतसो प्रबन्ध भयो । हामीहरु केही कुराको प्रतीक्षा गर्छौ । प्राप्तिसँगै पट्यारलाग्दो त्यो प्रतीक्षाको समयलाई ब...
शीर्षक राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको 'भँगेरा र भँगेरी' कविताबाट सापटी लिइएको हो । कविताले भन्थ्यो 'यौटा आँखो तँ हेरी, अर्को ...
अब मैले छाडेँ साधु गुरु र गोपाल दासको प्रवचन् सुन्न । सजिलो छ, हातमा मोबाइल, घर र अफिसमा कम्प्युटर । युट्युब खोल्यो, सुन्यो । यो संसार बड...
मोटरसाइकलमा हिँडेका एक दर्जनको जमात जब बरगाछीबाट पूर्व लाग्छ, केही पसले झटपट सटरहरू बन्द गर्छन् । हातहातमा चम्किला तरबार छन् त निधारमा ...
पोखरा उपत्यका हेर्न लागि पाँच दसकअघि नै भ्यु टावर निर्माण गरिएको डाँडा पोखरेली पर्यटकीय क्षेत्रका पथप्रदर्शककै उपेक्षामा परेको छ । पो...
कुखुराका रैथाने प्रजातिको बजारमा सधैं माग उच्च , पाल्ने तरिका अझै निर्वाहमुखी । ल गानी र श्रम खन्याएर दुनियाँलाई छिटो फाइदा हात पार...